Nezvedu - Goridhe Pepa Kambani Limited
Pashure pemakore anopfuura gumi emusika akatsamwa, zviwanikwa kubatanidzwa, zvakaenzana mashandiro, brand brand manejimendi, Goridhe Pepa rave rinozivikanwa mabhizinesi boka muChina, iro rakabatanidza nzwisisika basa neR & D, kugadzirwa uye kutengeserana kweese mapepa & Pepa pulp. Goridhe Gwaro rinotevera renyika indasitiri yekuvandudza zano, inonamira kune yekuchengetedza nharaunda, inoomerera kune echinyakare budiriro, inosanganisa zviwanikwa zvemudzimba & Musika wepasi rese, inobata nemazvo misika nevatengi, uye edza kupa iyo imwechete yekumira sevhisi yemaviri & Pepa mumunda wepasirese wekugadzira kutengesa uye sevhisi.
Goridhe Pepa inonyanya kupa iyo kopi bepa, Woodfree offset bepa / bond paper, c2s art bepa / yakavharwa bepa, c2s art bhodhi / yakavharwa bhodhi, yakakwira yakawanda c2s hunyanzvi bhodhi, c1s dzenzou bhodhi / kupeta bhokisi bhodhi / fbb, yakakwira yakawanda FBB / GC1 / GC2, isina kabhoni bepa / NCR bepa, pepa reruvara, bhodhi bhodhi, rinodziya bepa, grey bhodhi / chip bhodhi, chena pamusoro testliner bhodhi / WTL, Chiedza uremu yakavharwa pepa / LWC, nhema bhodhi, kraft liner bepa, isina kuvharwa cupstock pepa, PE yakavharwa cupstock board, chikafu bhodhi, uye Liquid kavha bhodhi / LPB. Goridhe Pepa muShanghai, Qingdao, Beijing, Guangzhou, Jinan, Wuhan, Nanjing, Nanchang nemamwe maguta makuru aive amisikidza hofisi yekutengesa, uye akasimbisa yakakura yekutengesa network uye yekutengesa chiteshi. Kune bhizimusi renyika dzese, Goridhe Pepa rinoshanda pamwe neHong Kong headquarter, inobata ruzivo rwekugaya kunze uye bepa kunze.
Goridhe Pepa rakabudirira kuwana kumisika zhinji pasi rese. Bolivia, Peru, Colombia, Haiti, nezvimwe muSouth neMiddle America. Russia, Macedonia, Portugal, nezvimwe muEurope. Tanzania, Nigeria, Cameroon, nezvimwe mu Africa. Saudi Arabia, Bahrain, Dubai, nezvimwe kuMiddle East. Kazakhstan, Uzbekistan, Thailand, nezvimwewo, kuMiddle neSouth Asia. Zvakare inoshandira vatengi vakakura vemhando dzakadai seMETRO, WAL-MART K-MART, ES-SIMBA uye nevamwe vatengi hombe nevashambadzi munzvimbo zhinji dzekupedzisira masupamaketi uye mafekitori ekudhinda munyika.